Muxuu yahay Balan-qaadka Rooble u sameeyay Musharixiinta? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Axaddii shalay wacad ku maray in uu xaqiijin doono hufnaanta doorashada Baarlamaanka ee dalka ka socota iyo inuu saxayo khaladaadka jira.
War saxaafadeed lasoo saarey kadib kulankii Muqdisho kula qaatay musharixiinta shalay, ayuu Rooble ku sheegay inuu doonayo in la qaboojiyo xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay eedeymaha loo soo jeediyay xafiiskiisa, ee ku saabsan "daah-furnaan la'aan iyo xadgudubyo cad" ee lagu sameynayo habraacyadii iyo heshiiskii Sep 17 ee doorashada.
“Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu tix-gelinayaa tabashooyinka ay Midowga Musharixiinta ka muujiyeen hufnaanta doorashada, tabashada shacabka Soomaaliyeed iyo cadaadiska Beesha Caalamka, wuxuuna ballan-qaaday inuu si deg deg ah u qaban doono shirka Golaha wadatashiga Qaran si loo saxa khaladaadka,” ayuu Rooble yiri.
Kulanka Musharixiinta ay ka mid yihiin Madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay la yeesheen Rooble, waxay walaac xooggan ka muujiyeen boobka kuraasta Aqalka Hoose, waxayna sheegeen inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan.
Rooble oo ku qanciyay hufnaanta doorashada, wuxuu faray guddiga doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraaca doorashada ee lagu heshiiyey.
“Cid kasta oo ku xad gudubta hufnaanta doorashada waa lala xisaabtami doonaa,” ayuu Rooble hadalkiisa raacisay.
Kulanka ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii Musharixiinta Mucaaradka ay ku dhawaaqeen inaysan aqoonsan doonin natiijada doorashada meelaha qaar, iyagoo ku sababeeyay "daah-furnaan la'aan iyo ku xad-gudub cad" oo lagu sameeyay doorashada Baarlamaanka.